Iray, roa, fitaratra telo no mariky ny fitaratra-tontolo ara-batana, astral ary ara-tsaina; fitaratra kristaly, fitaratra ara-panahy.
Ny fitaratra ara-panahy no tontolon'ny famoronana. Ny tontolo ara-tsaina, ny tontolon'ny famoronana avy amin'ny famoronana; ny tontolon'ny saina ara-tsaina mitaratra ny taratra sy ny taratry ny tenany; ny tontolo ara-batana dia taratry ny fisaintsainana.
Vol. 9 MAY, 1909. Tsia
REHEFA isaky ny mijery fitaratra isika dia mahita zavatra izay mahatalanjona, mahafinaritra ary mistery. Ny zava-miafina dia tsy eo amin'ny sary sy ny taratry ny saina ihany, fa ao amin'ny fitaratra mihitsy, ny zavatra hita taratra, ny tanjona izay atrehany, ary izay asehony.
Inona no antsointsika hoe fisaintsainana, aloka ihany izany? tsy? fa na aloka aza izy dia inona ny aloka? Ny tanjon'ny eo alohan'ny fitaratra sy ny fampiasana azy dia ny filanjana ny akanjontsika sy ny fomba fahitantsika ny hafa. Ny fitaratra dia tandindon'ny illusion, ny tsy tena misy tsy manavaka amin'ny tena maha-izy azy. Ny fitaratra dia tandindon'ny tontolo ara-batana, astral, fisainana ary ara-panahy.
Tahaka ny ankamaroan'ny zavatra ilaina amin'ny sivilizasiona, manaiky ny fitaratra toy ny fifaninanana tsotra sy ilaina ary raisina ho toy ny fanaka mahazatra. Ireo fahagola dia nohajain'ny olona taloha ary heverina ho mahagaga, mistery ary masina. Talohan'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo dia tsy fantatra ny fahaizan'ilay fanamboarana fitaratra, ary nandritra ny taonjato maro ny tsiambaratelon'ny famoronana dia tazomina tsara ho an'ireo izay manana azy io. Ny varahina, volafotsy ary vy dia tamin'ny fitaratra tamin'ny voalohany nentina ho polish avo. Taty aoriana dia tsikaritra fa ny fitaratra dia miteraka tanjaka iray ihany, rehefa ampian'ny amboara metaly toa ny tiana, firaka, zinc ary volafotsy. Tamin'ny voalohany ny fitaratra natao tany Eropa dia kely ny habeny sy lafo vidy, ny lehibe indrindra dia 12cm ny savaivony. Vidy lafo ny fitaratra ankehitriny ary natao isaky ny habeny irina.
Ny fitaratra dia ny tarehimarika misy, avy amin'ny, na, na amin'ny alalany, inona no hazavana sy ireo endrika ao amin'ny hazavana dia taratry ny saina.
Fitaratra dia izay taratra. Izay hita taratra dia mety antsoina hoe fitaratra. Ny fitaratra tonga lafatra indrindra dia ny taratra izay hita taratra indrindra. Miondrika na mamadika ny hazavana, na izay taratry ny mazava. Ny fitaratra miondrika, mihodina, na manipy, ny taratry ny sary na hazavana izay arotsaka aminy arakaraka ny toerany na ny zoro izay apetraka azy amin'ny sary na hazavana.
Ny fitaratra na dia zavatra iray aza, dia amboarina amin'ny faritra na konstituire, izany rehetra izany dia mila atao fitaratra. Ireo singa tena ilaina amin'ny fitaratra dia ny fitaratra sy ny metaly na amalgam metaly.
Raha ny fitaratra misy kodiarana hapetraka eo aminy dia fitaratra izany. Fitaratra izay vonona ny ho hita taratra. Saingy ny fitaratra dia tsy taratry ny haizina ao anaty haizina. Ilaina ny hazavana mba ho taratry ny fitaratra.
Misy fitaratra tonga lafatra sy tsy lavorary. Mba ho fitaratra tonga lafatra, ny fitaratra dia tsy tokony ho marofy, mangarahara ary ireo roa lahy ireo dia tsy maintsy mitovy tanteraka ary mitovy refy amin'ny lafiny iray. Ny singa amin'ny amalgam dia tsy maintsy mitovy loko sy kalitao ary mitoetra miaraka amin'ny iray mifangaro izay miparitaka amin'ny fomba rehetra ary tsy misy kilema eo amin'ny vera. Ny vahaolana na ny akora izay manamboatra ny eo alohan'ny fitaratra dia tsy misy loko. Dia tokony hazava sy maharitra ao ilay hazavana. Rehefa eo ireo toe-javatra rehetra ireo dia manana fitaratra tonga lafatra isika.
Ny tanjon'ny fitaratra dia ny taratry ny zavatra iray raha ny tena izy. Ny fitaratra tsy lavorary manaloka, mihena, manala, izay taratry ny. Ny fitaratra tonga lafatra dia maneho taratry ny zavatra toa azy.
Na dia toa tsotra ho azy aza ny fisehoany, ny fitaratra dia zavatra mistery sy mahagaga ary manatanteraka ny iray amin'ireo asa ilaina sy manan-danja indrindra eto amin'ity tontolo ara-batana ity na amin'ireo sehatra efatra nasehony. Raha tsy misy fitaratra dia tsy ho afaka ny hahafantatra ny Ego ny zava-misy hita maso, na ny hisehoana an'izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ny famoronana, ny fanamafisana, ny famerenana sy ny fandinihana ny fisehon'ny tsy manam-pahaizana no miseho. Ireo fahitana dia tsy voafetra amin'ny fampiasana amin'ny tontolo ara-batana. Ireo firavaka dia ampiasaina amin'ny tany rehetra. Ireo firavaka dia namboarina amin'ny akora eto amin'izao tontolo izao izay ampiasain'ny olona. Ny fitaovana sy ny foto-kevitra iasan'izy ireo dia tsy maintsy hafa any amin'ny tontolo tsirairay.
Misy karazana efatra fitaratra: fitaratra ara-batana, fitaratra ara-tsaina, fitaratra ara-tsaina sy fitaratra ara-panahy. Misy karazany maro amin'ireto karazana fitaratra efatra ireto. Ny fitaratra isan-karazany dia manana ny tontolony manokana miaraka amin'ireo karazany maro samihafa ary ny karazana fitaratra efatra dia manana ny solontenany amin'ny tontolo ara-batana izay anehoana azy ireo.
Ny tontolo ara-batana dia tandindon'ny fitaratra iray tokana; ny tontolon'ny astraly amin'ny alàlan'ny fitaratra roa; ny saina amin'ny alàlan'ny velaran-tany telo, fa ny tontolo ara-panahy dia tandindona fitaratra amin'ny lafiny rehetra. Ny fitaratra tokana dia mitovy amin'ny tontolo ara-batana, izay hita avy amin'ny lafiny iray ihany — ny lafiny ankehitriny sy ara-batana. Ny fitaratra roa sosona dia manondro ny tontolon'ny astral, izay tsy hita maso avy amin'ny lafiny roa fotsiny: ny lasa sy ny ankehitriny. Ny fitaratra misy rihana telo dia maneho ny tontolo ara-tsaina izay mety jerena ary takarina amin'ny lafiny telo: ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Ny fitaratra miharihary rehetra dia mijoro ho an'ny tontolo ara-panahy izay akaiky ary fantatra amin'ny lafiny rehetra sy ny fotoana izay mitambatra ho lasa fiainana mandrakizay.
Ny lafiny tokana dia fiaramanidina; ny velaran-tany roa dia zoro; ny velarana telo dia fanao; ny tany rehetra, tontolon'ny kristaly. Ireto ny famantarana ara-batana ho an'ny fitaratra ireo tontolo ara-batana, ara-tsaina na astral, saina ary ara-panahy.
Ny vatana dia ny tontolon'ny fisaintsainana; ny astral, ny tontolon'ny taratra; ny tsaina, ny tontolon'ny fanatanjahantena, fifindrana, fanarenana; ny ara-panahy, ny tontolon'ny hevitra, hoe, fiandohana, famoronana.
Ny tontolo ara-batana no fitaratra an'ny tontolo hafa rehetra. Ny tontolo rehetra dia hita taratry ny tontolo ara-batana. Ao amin'ny filaharan'ny fisehoana, ny tontolo ara-batana dia ny teboka farany ambany indrindra azo amin'ny dingana tsy fandraisana andraikitra ary ny fanombohan'ny fizotran'ny evolisiona. Ao amin'ny fisehoan'ny fahazavana, rehefa miposaka midina mankany ambany indrindra ny hazavana dia miankohoka ary miverina mankany amin'ny avo izay nidinany. Ity lalàna ity dia zava-dehibe. Izy io dia maneho ny hevitra momba ny fandraisana andraikitra sy ny fivoarana. Tsy misy na inona na inona azo ivoarana izay tsy tafiditra. Tsy misy hazavana dia taratry ny fitaratra tsy atsangana amin'ny fitaratra. Ny tarehin'ny jiro rehefa mamely fitaratra dia ho hita taratra eo amin'ny zoro na curve iray izay nahatazany ny fitaratra. Raha ny andian-jiro atsipy eo amin'ny fitaratra amin'ny zoro 45 degre dia ho hita taratra izany zoro izany ary tsy maintsy fantarintsika ny zoro izay atsipy ny hazavana ao amin'ny fitaratra hahafahantsika milaza ny zoro amin'ny izay ho hita taratra. Araka ny tsipika mampiseho ny fanahy izay mifandraika amin'ny resaka dia hivoatra ho fanahy.
Ny tontolon'izao tontolo izao dia manakana ny fizotran'ny tsy fandraisan-kery ary mamadika izay ampifamadihin'ny fivoaran'ny fivoarana, amin'ny fomba mitovy aminy mitodika ny fitaratra amin'ny fandinihana ny hazavana izay ario eo aminy. Ny fitaratra ara-batana sasany dia taratry ny zavatra hita maso fotsiny, toy ireo zavatra hita ao anaty fitaratra mijery. Ireo fitaratra ara-batana hafa dia taratry ny hazavana avy amin'ny tontolo maniry, ara-tsaina na ara-panahy.
Anisan'ireo fitaratra ara-batana mety ho voatonona vato, toy ny onyx, diamondra ary kristaly; metaly, toy ny vy, tin, volafotsy, rakitra, volamena ary amalgams; ala, toy ny hazo oaka, mahogany ary vony. Miaraka amin'ny vatan'ny biby na taova ny maso dia mampiseho taratra mazava izay arotsaka eo. Avy eo, misy ny rano, rivotra, ary lanitra, izay taratry ny hazavana sy ny zavatra hita taratra.
Ny fitaratra ara-batana dia misy endrika samihafa. Misy fitaratra lehibe sy beveled. Misy fitaratra concvex sy convex, lava sy malalaka ary tery. Misy fitaratra izay miteraka fiantraikany miafina, manelingelina ny endrik'izay miatrika azy ireo. Ireo karazana fitaratra samihafa ireo dia maneho ny lafin-tsain'izao tontolo izao izay fitaratra an'ny tontolo hafa.
Izay hitantsika eo amin’izao tontolo izao dia taratry ny zavatra ataony eto amin’izao tontolo izao. Mampiseho izay eritreretiny sy ataony ny tontolo. Raha manentsina sy mamihina ny felany izy, dia toy izany koa izany. Raha mihomehy izy dia mihomehy ihany koa ny fandinihana. Raha mahatalanjona azy izy, dia hahita fahagagana aseho amin'ny andalana rehetra. Raha mahatsapa alahelo, hatezerana, fitiavam-bola, asa-tanana, tsy manan-tsiny, fetsy, tsy manan-toetra, fitaka, fitiavan-tena, fahalalahan-tanana, fitiavana izy dia hahita ireny voataona ireny ary hamerina azy indray izao tontolo izao. Ny fiovan'ny fihetseham-po rehetra, ny horohoro, ny fifaliana, ny tahotra, ny fahafinaretana, ny hatsaram-panahy, ny fialonana, ny zava-poana, dia hita taratra.
Izay rehetra tonga eto amintsika amin'izao tontolo izao dia ny fandinihana ny zavatra nataontsika na tamin'izao tontolo izao. Mety hafahafa izany ary toa tsy marina raha jerena ny fisehoan-javatra sy tranga maro mitranga amin'ny olona iray mandritra ny androm-piainany ary toa tsy natambatra na nifanerasera tamin'ny eritreriny sy ny nataony. Tahaka ny eritreritra vitsivitsy vaovao, hafahafa izany fa tsy marina. Ny fitaratra dia haneho ny mety ho marina; tsy maintsy mahafantatra ny lalàna ny olona alohan'ny hanjavona ny mampiavaka azy.
Amin'ny fanandramana amin'ny fitaratra dia mety hianatra zava-miseho hafahafa ny olona iray. Avelao ny fitaratra lehibe roa apetraka mba hifanatri-tava amin'izy ireo ary avelao ny iray hijery any amin'ny fitaratra iray. Ho hita eo ny tarehin'ny tenany manatrika ny atrehiny. Avelao izy hijery ny taratry ny fisaintsainana izay ho hitan'ny fitaratra ao aoriany. Avelao izy hijery any amin'ny fitaratra eo alohany ary hahita ny tenany izy ho fitaratra ny taratry ny taratry ny tenany voalohany. Io dia hampiseho aminy fisaintsainana roa momba ny fijery eo aloha sy ny fijerin'ny roa-tenany amin'ny tenany. Avelao tsy ho afa-po amin'izany izy fa mbola hijery lavitra ary hahita taratra hafa sy hafa iray hafa. Matetika izy no mijery ny hafa dia hahita azy ireo, raha toa ny haben'ny fitaratra dia mamela azy, mandra-pahitany ny fisaintsainan'ny tenany manalavitra ny halaviran'ny masony, ary ny fisaintsainany dia ho toy ny andian-dehilahy. mivezivezy amin'ny lalana lavitra mandra-pahitan'izy ireo satria tsy afaka mahita tsara ny maso. Azontsika atao ny mitondra ny fanoharana ara-batana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fitaratra ka hisy efatra, valo, enina ambin'ny folo, telo-polo, tsiroaroa ary mifanohitra. Avy eo hitombo ny isan'ny fisaintsainana ary tsy hanana endrika ivelany sy aoriana ihany ilay manandrana, fa hahita ny tarehiny avy amin'ny ilany havanana sy havia ary avy amin'ny zoro mpanelanelana samihafa. Azo alaina amin'ny alàlan'ny fananganana efitrano iray feno fitaratra, ny gorodona, ny valin-drihana ary ny rindrina efatra misy ny fitaratra ary ny zoro dia apetraka fitaratra. Mety hitohy mandritra ny fotoana tsy voafetra izany. Dia ho ao anaty maze ny fanandramana, hahita ny tenany avy any ambony sy ao ambany ary avy eo aloha sy ao aoriana; amin'ny zoro rehetra sy ao amin'ny fandinihana matetika.
Zavatra iray izay mitranga na hita taratra antsika amin'ny fihetsiky ny olon-kafa iray, dia toa miova hevitra amin'ny fisaintsainantsika na ataontsika amin'izao tontolo izao ankehitriny, ary, na dia dinihintsika amin'ny fomba fijery ankehitriny aza izany, tsy ho hitantsika ny fifandraisana. Raha te hahita ny fifandraisana isika dia mila fitaratra hafa, izay taratry ny taloha. Dia ho hitantsika izay atsipy eo anoloantsika ankehitriny, dia taratry ny ao aoriana. Ny zava-mitranga izay tsy azo zahana amin'ny antony na ny loharanon'izy ireo, ny fandinihana natao an-tsehatra ankehitriny, ireo fihetsika efa hatry ny ela, hetsika izay nataon'ny mpilalao, ny saina, raha tsy amin'ity vatana ity amin'ity fiainana ity, dia amin'ny vatana hafa any fiainana teo aloha.
Raha jerena ny fisaintsaintsainana dia natao ho an'ny olon-tsotra izany tokony hanana fitaratra mihoatra ny iray. Ny singa tena ilaina amin'ny fanandramana dia ny fananana hazavana izay mamela ny endriny sy ny asany. Toy izany koa, ilaina ho an'ny olona izay mahita ny fifandraisana eo amin'ny endriny ankehitriny sy ny zavatra nataony amin'ny endrika hafa sy ny zavatra nataony tamin'ny lasa, ary koa amin'ny endriny hafa amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny manana endrika endrika- andro ary tano ho eo ambadiky ny saina. Raha vantany vao hita taratra ao amin'ny fahazavan'ny saina ny endrika dia taratra eo amin'ny fahazavan-tsaina, ity taratra ity dia hita taratra eo indray. Ny fisaintsainana tsirairay dia fitohizan'ny fisaintsainana taloha, tsirairay avy amin'ny endrika iray taloha. Avy eo, ny endrika sy ny fandinihana izay tonga ao an-tsaina, amin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra, dia ho jerena mazava sy miaraka amin'ny hery sy ny fahatakarana ny herin'ny saina hijerena, hanavahana ary hanavahana ny tena ankehitriny. ny lasa sy ny fifandraisan'izy ireo.
Tsy ilaina amin'ny iray ny fitaratra hahita ny fisaintsainana raha afaka manandrana izy amin'ny alàlan'ny taratry ny sainy ao anaty hazavana azy manokana. Araka ny fitaratra mety ho nasehony ary izay hahitany ny fisaintsainany hita taratra, hampitomboina sy hampitombo tsy manam-petra ny isa, be dia be izy no mahita tsy misy fitaratra, raha azony atao ny misaintsaina azy ao an-tsainy. Tsy ho afaka hahita ny taratry ny vatany ao an-tsainy akory izy, fa mety afaka mifandray sy hahita ny fifandraisan'ny zava-drehetra mitranga aminy, amin'ny fiainany ankehitriny, ary ho fantany avy eo fa tsy misy na inona na inona. mitranga fa izay mifandraika amin'ny fomba sasany amin'ny fiainany ankehitriny, ho taratry ny fihetsika taloha, na ireo andro hafa eto amin'ity fiainana ity.
Ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao, na mamelona na tsy manana fiainana dia antsoina, fa ny fitaratra na fandinihana ny tarehin'ny olombelona amin'ny endriny samihafa. Vato, tany, hazandrano, vorona ary biby samy hafa amin'ny karazany sy endriny samy hafa, no endrika hita taratra sy taratry ny eritreritra sy ny filan'ny olombelona. Olombelona hafa, amin'ny fahasamihafana sy toetrany isankarazany ary ny tsy fitoviana sy ny toetrany tsirairay tsy tambo isaina, dia hita taratra be dia be ny taratry ny olombelona hafa. Io fanambarana io dia toa tsy marina loatra amin'ny olona iray izay tsy tonga dia mahita ny fifandraisan'ny tenany sy ny olona ary ny zavatra hafa. Azo lazaina hoe fitaratra ihany no manome taratra, izay fisaintsainana tsy zavatra hita taratra ary, fa ny zavatra dia miavaka amin'ny taratry ny taratry ny saina, ary eo amin'izao tontolo izao dia misy ny zavaboary ao aminy ho zavaboary mahaleo tena. Ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia misy refy, antsoina hoe lava, halavany ary hatevina, fa ireo zavatra hita ao amin'ny fitaratra ireo dia taratry ny tariby, manana halavany ary sakany, saingy tsy matevina. Ankoatr'izay, ny fisaintsainana ao amin'ny fitaratra iray dia nanjavona raha vao nesorina ilay zavatra alohan'ny hanesorana azy, fa ny zavamananaina kosa dia mihetsika ho toy ny zavaboary miavaka eto amin'izao tontolo izao. Amin'ireo fanoherana ireo dia azo valiana fa ny fanoharana iray amin'ny zavatra iray dia tsy zavatra izay asehony, na dia mitovy endrika aminy aza izy io.
Gaze anaty fitaratra mijery. Hita ve ny fitaratra? sa ny fiaviany? sa izay mihazona ny fiafarana sy ny fitaratra miaraka? Raha izany dia tsy hita mazava ny taratry ny saina, fa amin'ny fomba tsy azo anoharana ihany. Amin'ny lafiny iray, hita mazava tsara amin'ny endrika sy endrika ny tarehimarika misy ve? Raha izany dia tsy hita ny vera, ny fiaviany, na ny mitazona azy roa tonta. Hita ny fandinihana. Ahoana no ifandraisan'ilay fandinihana izay hita taratra ao? Tsy misy fifandraisana hita eo anelanelan'ny fandinihana sy ny tanjony. Izy io, toy ny taratry ny saina, dia tsy mitovy amin'ny maha izy azy.
Ary indray, ny fitaratra-mijery dia mampiseho ny isan'ireo andaniny izay manondro azy. Izay rehetra izay ho hitan'ny tarehimarika hafa dia mety ho hita taratra amin'ny fitaratra fitaratra. Zavatra iray tsy hita ao anaty fitaratra fotsiny no ahitantsika ny endriny; fa tsy misy olona hita eto amin'izao tontolo izao intsony. Izay hita eo amin'ny morona ihany no hita, ary rehefa tonga any amin'ny atiny ny atiny, dia izany no miseho eto an-tany. Avy eo hita eo ihany no hita ao anaty fitaratra mijerijery. Ny hevitry ny halaliny na ny hatevina dia azo antoka sy mazava tsara ao anaty fitaratra fitaratra toy ny zavatra rehetra ankoatra azy. Ny elanelana dia hita eo amin'ny fitaratra fitaratra koa na dia mety ho hita raha tsy misy azy. Na izany aza, ny fitaratra mijery fotsiny. Toy izany koa izao tontolo izao. Miaina sy mihetsika eto amboninny tany isika toy ny zavatra hita ao anaty fitaratra mijery zavatra.
Ny tarehimarika sy endrika izay mihetsika eto amin'izao tontolo izao dia voalaza fa misy ao aminy ary tsy mitovy amin'ny taratry ny fitaratra hitazana. Saingy izany dia tsy hoe amin'ny halavan'ny fotoana fotsiny fa tsy amin'ny tena izy. Ireo endrika mihetsika manerana ny tany ihany dia taratra fotsiny, toy ny fitaratra mijery. Ny sary izay taratry izy ireo dia vatana astral. Izay tsy hita; hany ny taratra ihany no hita. Ireo endrika hita taratra eto amin'izao tontolo izao dia tsy mitsahatra mihetsika raha toa ka miaraka aminy ny sary taratry azy ireo. Rehefa miala ny sary dia mivaingana, ny endrika, toy ny ao anaty fitaratra mijery. Ny fahasamihafana dia tsy amin'ny fotoana ihany, fa tsy amin'ny fotony.
Ny olona tsirairay dia tsy mitovy amin'ny olona hafa rehetra ao anaty fangaro, endrika sy endri-javatra, saingy amin'ny ambaratonga ihany. Ny endrik'olombelona dia taratry ny rehetra. Ny orona dia orona na misy mibontsina na manondro, matevina na boribory, matevina na manify, lava na fohy, voahangotra na malama, malama na malama; maso dia maso na volontany, manga na mainty, almond na ball. Mety ho maloto, likera, mirehitra, manondraka, mbola maso ihany izy. Ny sofina dia mety ho elefantine na mihena ao amin'ny anjaran'izy ireo, miaraka amin'ny tracings sy ny loko miloko marefo toy ny akorondrano an-dranomasina na malefaka sy mavesatra toy ny tapany malemy, saingy sofina kosa izy. Ny molotra dia mety haseho amin'ny kozatra sy tsipika malefaka, malefaka na maranitra; ny vava dia mety hiseho toy ny voapaika na marihitra eo amin'ny tarehy; vava ihany anefa izany ary mety handrenesana feo hankafizan'ireo andriamanitra kilemaina na mampatahotra ireo rahalahiny devoly mihitsy aza. Olana ny endri-javatra ary maneho ny karazany sy ny taratry ny toetran'ny olombelona maro be.
Ny olombelona dia karazana sy ambaratonga maro be amin'ny toetran'ny olombelona izay hita taratra amin'ny fisaintsainan'ireo andaniny na lafiny samihafa amin'ny maha-olombelona. Ny zanak'olombelona dia lehilahy, lahy-vavy, izay tsy hita, tsy mahita ny tenany afa-tsy amin'ny fisaintsainany roa, antsoina hoe lehilahy sy vehivavy.
Nandinika fitaratra ara-batana izahay ary nahita ireo zavatra hita taratry azy ireo. Andao isika handinika fitaratra ara-tsaina ankehitriny.